Fantatro hoe Iza no Hofidiko | Martech Zone
Fantatro izay hifidianako
Alatsinainy Martsa 26, 2007 Alahady, Septambra 30, 2012 Douglas Karr
Eo izany, ry vahoaka… ny filoha faratampony! Christopher Walken! Azonao an-tsaina ve ilay kabary fanekena? Tena mahafinaritra izany!
Angamba mila lakolosy kely bebe kokoa isika ao amin'ny White House.
Tsaroako ny famoahana azy tamin'ny mbola kely fony aho nijery an'i Deer Hunter ary mpankafy aho hatrizay. Heveriko fa efa nijery an'arivony ny manokana Walken Saturday Night Live.
PS: Ie, sangisangy izany! Fa tena mampihomehy. Nanao ny fanahafana an'i Walken aho hatramin'ny nahitako an'io.
Ity misy iray izay noraketiko an-tsoratra izao hariva izao… ny teny avy ao amin'ny Walken ho an'ny filoham-pirenena 2008 pejy fandraisana. Ampahafantaro ahy raha tokony hiala amin'ny fanaovana bilaogy aho ary ho tonga mpaka tahaka an'i Walken fotsiny… sa tsia.
Tsy maty ny gazety, maty ny fivarotana vaovao
Mianatra mitaingina bisikileta sy rindrambaiko fananganana
Mar 26, 2007 ao amin'ny 9: PM PM
ahh izy no tiako indrindra .. hatrizay nanaovany an'io horonantsary mozika io .. ilay nandihizany .. nanomboka tsapako fa mpanao hatsikana izy .. na rehefa nanao an'io spoof io tamin'ny SNL .. niaraka tamin'ny 'More cowbell'. , .. lehilahy nanenjika ahy!
Mar 27, 2007 amin'ny 12: 30 AM
Walken dia kilasika. Tiako ity lehilahy ity. Ireo skit ao amin'ny SNL izay ezahany hakana sary an-tsaina ilay fakan-tsary (olona) ary manandrana manao azy hijanona eo amin'ny toerany foana.
Manahaka tahaka an'i Doug! Tena azonao io NY twang goin io. 😉
Mar 27, 2007 amin'ny 5: 59 AM
Misaotra, Tony. Tsy maintsy nitady izany lalina aho. Tena nihalehibe tany Connecticut aho ka nanana ny lantom-peony… mandra-pahatongako nifindra tany Vancouver, BC izay nandehanako tany amin'ny lisea ary nipaoka ny vodiko ho toy ny Yankee.
Avy eo, rehefa niverina ny fanjakana aho dia nilatsaka haingana ilay “eh?” any amin'ny faran'ny fanontaniako…
Mety ho iray amin'ireo vitsy afaka miresaka amin'ny olona avy amin'ny fanjakana (na firenena) aho ary amin'ny faran'ny resaka dia miresaka amin'ny lantom-peony aho.
Mar 27, 2007 amin'ny 9: 24 AM
Tena tsara izany teo Doug…
“Tsia, tsia, tsia… azafady aza mandeha. Aza miraharaha ny fisalasalana, ny firongatry ny lehilahy mararin'ny sasany, sahia hoy aho, tsia… .. Tsy sahiko. Ny DOE misy rambo fotsy sy maso malalaka. ”
Mar 27, 2007 ao amin'ny 1: PM PM
Mar 27, 2007 amin'ny 9: 40 AM
Christopher Walken taloha sa Christopher Walken vaovao?
Sarimihetsika ratsy be no vitany tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Ahh, fa na i Christopher Walken ratsy aza dia fampisehoana mahafinaritra!